Abụọ abụọ Petpals franchisees ruru na njedebe nke mba Pet Industry Federation (PIF) onyinye | Franchiseek
»Abụọ abụọ Petpals franchisees ruru na njedebe nke mba Pet Industry Federation (PIF) onyinye
Abụọ abụọ Petpals na-eme ememme na-eru nso ngwụsị nke onyinye nke Pet Industry Federation.
Na mgbọrọgwụ nke laghachi na ngwụcha 1940, Pet Industry Federation na-anọchite anya ndị ọkachamara azụmaahịa anụmanụ ise. Ha na-enye mmesi obi ike nke azụmaahịa dị na ngalaba ahụ, yana ndị otu niile na-ekwenye ịgbaso usoro iwu ha, nke na-anọchite anya omume kachasị mma maka mkpakọrịta dị iche iche.
Awardsgwọ a na-eme ihe ịga nke ọma n'ofe dịgasị iche iche nke ngwaahịa, ọrụ, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu ma nye usoro ikpo okwu iji gosipụta ịdị mma na ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ anụ ụlọ.
N'ime edemede 16 dị maka ịbanye, Petpals Darlington & Yarm, nke David na Sallyann Gray nwere, ruru ngwụcha nke otu 'Pet Service Business of the Year' na Petpals Chislehurst, nke Sandra na Ray Hipwell nwere bụ ndị ikpeazụ na ' Atumatu ohuru nke afo.
Petpals bụ nzukọ aha nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ 50 nweere onwe ha, na-elekọta anụ ụlọ n'ofe UK ma bụrụ onye otu British Association Franchise.
David na Sallyann Gray kwuru,
'Obi dị anyị ụtọ na anyị erutewo ngwụcha nke onyinye mba ndị a. Ọ bụ nnukwu mmata na anyị nwere ụdị azụmaahịa anyị ziri ezi ma na-enye ogo na ọrụ ọkachamara anyị na-agba mbọ iji nweta kwa ụbọchị. Anyị na-ekwusi ike na ọ bụrụ na ị ga - abụ ezigbo Petpals franchisees, ị gaghị ahụ anụmanụ n'anya naanị, mana ị ga - ama otu ị ga - esi na - azụ ahịa dị mma. Anyị abụghị mpaghara Petpals kasịnụ na netwọkụ, mana anyị na-elekwasị anya nke ọma na ndị ọrụ anyị na omume azụmaahịa, nke nyeere anyị aka ịbụ otu n'ime ihe ịga nke ọma.
Anyị na-agbasi mbọ ike isoro ndị obodo anyị na-azụ ahịa na mpaghara mpaghara. N'oge na-adịbeghị anya, anyị nyere aka na-arụ ọrụ na Darlington Borough Council na azụmahịa dị na mpaghara, iji hụ na a na-etinye PSPO (Iwu Ọha Nchedo Ọha) n'ụzọ ziri ezi ma anyị nwere nnukwu mpako na anyị nwere ọrụ kachasị na ịmepụta otu ọrụ ọhụụ - mmekọrịta ya na kansụl ahụ, iji nyefee usoro agụmakwụkwọ maka abamuru nke ndị niile bi na ya, n'ihe ekwenyere na ọ bụ ụdị nke mbụ na UK. '
Ọ bụ Ray na Sandra Hipwell nwe Petpals Chislehurst. Sandra bụ onye na-edekọ ego na Ray bụbu onye na-azụ ọkwọ ụgbọ ala maka London Fire Brigade. Ha zụtara aha ha na njedebe nke 2018 nke ha na-agba ọsọ ọnụ.
'A na-afụ anyị ọkụ ka anyị erutela ngwụcha nke otu' New Business of the Year '. Site na oge anyị mepere ụzọ anyị na Petpals Chislehurst ọ kwụsịla kpamkpam. Anyị nwere ndị ahịa na-ede akwụkwọ tupu anyị alaghachi na izipụ akwụkwọ mbido mbụ anyị n'oge izu mmalite anyị na onye njikwa nkwado mpaghara Petpals! Isi ụlọ ọrụ nyeere anyị aka nke ukwuu n'oge ndị ahụ, na-eduzi anyị site na mmalite ahụ na ndụmọdụ ahịa na mgbasa ozi nke anyị na-amaghị.
'Obi dị anyị ụtọ ị nweta' Best Start-Up Franchise 'na ọgbakọ ogbako 2018 Petpals na onye na-agba ọsọ na' Onye Kachasị Mma Franchise Performer 'na 2020. Agbanyeghị na ajụrụ anyị ọtụtụ oge, anyị echeghị na enwere 'Ihe nzuzo' maka ihe ịga nke ọma anyị, anyị na-etinye anụ ụlọ ahụ oge ọ bụla na ndị nwe ha nwere ekele maka nke a. Ọ dị anyị mkpa na oge ọ bụla anyị gara pusi ma ọ bụ obere anụmanụ ma ọ bụ na-eje ije ma ọ bụ banye na nkịta, ha nwere ezigbo ahụmịhe dị mma.
'Anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa bụ ndị ọrụ dị mkpa, ndị anyị nọgidere na-eje ije n'oge ọrịa Ọrịa Corona. Ndị ahịa a maara na ha nwere ike ịdabere na anyị ilekọta anụ ụlọ ha, dị ka nke ha, ebe ha gara ịrụ ọrụ maka NHS n'ogo nke ọrịa ahụ; anyị kwenyere na ọ bụ ụdị nraranye na ọrụ aka a kewapụrụ anyị na ndị asọmpi anyị. Y'oburu na anyi nwere obi oma iji merie onyinye a, anyi maara na ndi ahia anyi ga enwe obi uto n'ihi anyi, o gha abu icing na achicha ahu mgbe anyi bidochara nke oma ma anyi na-agafe mkpịsị aka anyị niile.
MD nke Petpals Kevin Thackrah kwuru,
'' Enweghi otu onye mana abuo nke aha anyi na njedebe nke onyinye ndi a nke oma bu ozi oma na ihe anyi no n'isi ulo oru, ma gafee oru nile, nwere obi uto nke ukwuu. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ha na-anọchite ma aha ọhụrụ ma guzosie ike nke dị mma ịhụ. Ndị mmadụ abụghị nanị ọnụ ọgụgụ na Petpals, ha bụ akụkụ nke ezinụlọ Petpals ma anyị na-akwado ha niile n'otu ụzọ ahụ site n'aka ndị ọrụ anyị nwere ọmarịcha n'isi ụlọ ọrụ, na netwọkụ nkwado anyị nke 50 + franchisees. Achọrọ m ka ha abụọ mee nke ọma na ngwụcha ma na-atụ anya ịme ọganiihu ha n'ọdịnihu dị nso.
Kwụsị Septemba 2020
Edere ndị editọ
Petpals UK (Ltd) bụ onye ndu UK na-ahụ maka mkpanaka, nlekọta anụ ụlọ ọkachamara, maka ụmụ anụmanụ sitere na nkịta na nwamba na obere anụ ụlọ dịka oke bekee, gerbils, nnụnụ, exotics
Ọrụ Petpals gụnyere:
Pita anọdụ ala
Nkịta na-eje ije
Boardbanye n'ụlọ - nkịta & obere anu ulo
Nleta nlekọta nke okenye
Enwere ike ịkpọtụrụ ụmụ anụmanụ na:
Mmekọrịta Business na Innovation Center, Caxton Close, East Portway, Andover, Hampshire, SP10 3FG
Petpals bu onye otu ndi no na British Franchise Association na EWIF (Igba Ndi Nwanyi ume ka ha banye Franchising)